Never Say Goodbye ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel November 27, 2016
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါနော် … ဟုတ်ပါတယ် trailer ပဲ ထွက်ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်ကတည်းက တကြော်ကြော် တောင်းဆိုကြတဲ့ Oppa Lee-Joon Gi ရဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ...
Melodrama , Romance ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး တရုတ် နဲ့ ကိုရီးယား ဖက်ဆက်ရိုက်ကူးထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Main Cast အနေနဲ့ကတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာ မလိုပါဘူး သိကြမှာပါ … Moon Lovers ထဲက ခေါင်းဆောင်မင်းသား ပျိုတိုင်းချစ်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကြီး Lee-Joon Gi နဲ့ တရုတ်မင်းသမီး Zhou Dongyu တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ….
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ တရုတ်ပြည် ရှန်ဟိုင်းကို စာလာသင် အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုရီးယားကောင်လေးနဲ့ … တရုတ်ပြည်က ကောင်မလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ … ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက ထင်သလောက် လုံးဝ မရိုးရှင်းပါဘူး … အလှည့်အပြောင်းလေးတွေ များစွာပါဝင် ပါတယ် … ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကို ဒီလောက်ပဲ ပြောပြလိုက်တော့မယ်နော် …. ဆက်ပြောပြချင်ပေမဲ့ ဇာတ်ရှိန်ပေါ့သွားမယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ ….
ကဲ ... အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြည့်ပြီးတော့ ရင်ဘက်ကြီးနဲ့ ခံစားလိုက်ကြပါဦးနော် …
Download on pcloud Link ( 787MB )
China Melodrama Romance
Labels: China Melodrama Romance
Tee Kaung September 2, 2017 at 11:54 AM
another link please. pcloud can't use.